नेपालबाट व्यापार सुरु, अर्वपति बनेर बलिउड अभिनेत्रीसँग विवाह गरेपछि !!! – cafeguff
बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी र राज कुन्द्राको विवाह भएको ८ वर्ष भएको छ । २२ नोभेम्बर सन् २००९ मा उनीहरुले विवाह गरेका थिए । शिल्पा सेट्टीले विवाहको ७ औ एनिभर्सरीमा राज कुन्द्रालाई सामाजिक सञ्जालमा एउटा माया लाग्दो मेसेज लेखेर पठाएकी छिन् । शिल्पाले मेसेजमा ‘तिम्रो दिलमा मैले आफ्नो घर पाए, आत्मामा माया । म विश्वकै भाग्यमानी युवती हुँ ।’
त्यसपश्चात उनलाई पछाडि फर्केर हेर्ने अवस्था कहिल्यै आएन । आज उनी १० कम्पनीका मालिक हुन सफल भएका छन् । सन् २००४ मा आएको ब्रिटिश म्यागजिन धनी व्यक्तिहरुको सुचीमा राज १९८ औ स्थानमा रहेका थिए
एक सय किलो तौल भएकी जरीन खानले कसरी घटाइन ५० किलो तौल ? हेर्नुहोस
बलिउड अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रेलाई क्यान्सर
यति हट छिन् संजय दत्तकी छोरी त्रिशाला तर संजयले फिल्म खेल्न दिँदैनन्, हेर्नुहोस् ८ फोटो